Posted by PhyoPhyo at Thursday, September 20, 2007 Labels: ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ပုံတွေ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, September 18, 2007 Labels: ကျွန်မရဲ့ အကြောင်း
ဦးအောင်သန်း ဒေါခင်မေသစ်တို့၏ သားသမီးခုနစ်ဦးအနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ရင်း ရူပအောင်ပါ။ ပျဉ်းမနားမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်မှ B.Sc. (Hons.) Zoology ဘွဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများနဲ့ သတင်းများ၊ ပန်းချီအနုပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများနဲ့ သတင်းများ၊ ဘောလုံးဆောင်းပါးများ ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားခြင်းနဲ့ စာပေနယ်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတွေကိုတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ရေးသားခဲ့တယ်။ "ခြောက်ရက် ငါးညတာ အိမ်ထဲမှာ" ဝတ္ထုက ကျွန်မရဲ့ ပင်ကိုရေးပထမဆုံးဝတ္ထုဖြစ်ပြီး Teen မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁- အွန်လိုင်းရွှေဝတ္ထုတိုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ (SBOGS) မှ ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် အွန်လိုင်း ၀တ္ထုတိုဆု မှာ “စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ … ငါ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာ” ၀တ္ထုတို နဲ့ တတိယဆုရခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာပြန်စာပေတွေ၊ ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတွေကို ကျွန်မရဲ့ www.myworld-phyophyo.com / www.phyophyohlaing.blogspot.com နဲ့ မြန်မာမဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားနေပါတယ်။
စာရေးခြင်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်သွားခဲ့ပြီမို့ စာမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တိုင်း သုတ ရသ စာတွေ ကြိုးစားရေးသွားမှာပါ။
“ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ရေးစရာတွေချည်းပဲ .... ကြိုးစားပြီး ရေးရပါဦးမယ်” ပေါ့။
mail: maerupa77777@gmail.com/ phyophyohlaing@gmail.com
"ဘလောဂ့်စလုပ်ဖြစ်ခါစက ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ကမ္ဘာမို့ ဖျက်မပြစ်ရက်ဘူး"
ကျွန်မ အစ်ကိုနဲ့ အစ်မ တွေကတော့ ကျွန်မကို ဟာသဥာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ် ။
ကျွန်မအလုပ်က web designer ပါ .. web development company တစ်ခုမှာ
ဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာလား.. အင်း ..သိပ်ကြိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်မစိတ်သိပ်ညစ်လာတဲ့အခါ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲ ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်စိတ်ညစ်တာလေးတွက သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်။
စာအုပ်မှာ သုခမြို့တော် ကြိုက်တယ်၊ ကိုဗော့စကီး (Stephan Kovalski) လို လူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေပြီလို့ထင်တယ်၊